Yahoo Messenger dia navaozina tanteraka hatramin'ny voalohany | Androidsis
Yahoo Messenger dia nohavaozina tanteraka mba ho lasa fampiharana tsara kokoa
Yahoo Messenger dia iray amin'ireo fampiharana amin'ny PC izay dia niatrika ny Messenger Messenger manokana taona maro lasa izay raha tsy nisy ny Facebook ary nanomboka namolavola ny YouTube niaraka tamin'ireo mpamorona roa izay nandefa izay lasa behemoth lehibe irery. Taona vitsivitsy izay, raha te hifandray amin'ireo mpifanerasera na namana dia tsy maintsy nihemotra tamin'ireo fandaharana roa ireo izahay. Fandaharana roa izay nanolotra traikefa nahafinaritra an'ny mpampiasa ary efa niankina tamin'ny tsirony tamin'ny fisafidianana ny kaonty mailaka Yahoo na kaonty Hotmail hanapahana hevitra iray.
ankehitriny amin'ny fotoana vaovao hafa isika izay niovan'ny tontolon'ny serasera be dia be noho izay nisy tamin'ireny fotoana ireny. Saingy tsy manakana antsika tsy hiteny izany fa ny Yahoo Messenger dia navaozina tanteraka hatrany am-boalohany mba hitondrana antsika amin'ny kinova vaovao ny rindranasa iray izay tena ilay rindram-pifandraisana izay nandrasan'ny mpampiasa maro hatry ny ela. Yahoo Messenger dia manana endrika vaovao tanteraka, ary ankoatry ny fisehoana tsy mitovy amin'ny fahitana azy, dia manampy fiasa marobe izay ahafahantsika maneho hevitra momba ny fampidirana an'i Flickr, Tumblr ary Xobni.
1 Fampidirana miaraka amin'i Flickr, Tumblr ary maro hafa
2 Volavola sy maro hafa
Fampidirana miaraka amin'i Flickr, Tumblr ary maro hafa
Raha manapa-kevitra ny hirehareha amin'ity endri-javatra fampidirana serivisy hafa ato amin'ity rindrambaiko ity izahay ho an'ny fifandraisana sy ny fandefasana hafatra, dia satria mamela antsika hanao hetsika manaitra toy ny fahaizana manao mandefa sary an-jatony avy ao amin'ny Flickr indray mandeha. Raha alefanay anaty chat group ireto sary ireto dia hiseho ao anaty resadresaka nifandraisanay tamin'io vondrona io daholo ireo sary ireo, ka azo alaina ao anaty vahaolana feno mihitsy aza io sary io.
Ny fiasa mahafinaritra iray hafa dia ny fahaizan'ny mamafa hafatra iray nalefa. Raha vao tsindrio ny «tsy alefa», dia ho voafafa ny hafatra, tsy amin'ny resadresaka ataontsika ihany, fa koa amin'ny an'ireo izay nahatratra. Izy io koa dia manana lafiny hafa, toy ny fahaizana "tia" nandefa hafatra, sary na GIF.
Maneho hevitra momba an'io GIF io, ny Yahoo Messenger dia manana mikaroha GIF avy amin'i Tumblr amin'izay ianao tsy mila misintona azy ireo any amin'ny terminal na mizara azy ireo amin'ny fampiharana hafa, izay manome azy fahaiza-manao tsara hahazoana atiny izay zaraina amin'ny namana na mpifandray.
Volavola sy maro hafa
Ao amin'ny Yahoo Mail efa afaka nanamarina ny fomba Yahoo dia nampiditra Material Design fa amin'ny fombany sy ny bika. Io fomba io ihany amin'ny fampidirana gradien izay tsy manolotra loko fisaka dia manala baraka ny tonony hafa amin'ny hafa. Azo antoka fa tsy tian'ity Google ity ny fiantsoana an'ity interface ity ho toy ny Material Design, saingy ity no tian'ny Yahoo hamantatra ny tenany amin'ny fombany manokana fa ataovy mora amin'ny mpampiasa amin'ny alàlan'ny fampiasana singa sasany toy ny fitetezana ny lafiny tontonana.
Na izany na tsy izany, ny famolavolana ny fampiharana dia tratra tsara manolotra traikefa tsara ho an'ny mpampiasa, ary ho an'ireo mpankafy an'ity fampiharana fandefasan-kafatra ity dia azo antoka fa hankasitraka azy ireo izy ireo nanomboka ny taona 2016 miaraka amina interface vaovao izay tonga amin'ny fotoana mahamety azy izay tadiavintsika hatrany ireo tanjona sy tolo-kevitra vaovao.
Yahoo Messenger mahazo, raha fintinina, a fanavaozana notadiavina hatry ny ela ary izany dia mampindrana izany amin'ireo mpampiasa an-tapitrisany an'izao tontolo izao. Ankehitriny dia azo lazaina fa mitovy amin'ny ambaratonga maro hafa amin'ity karazana ity izy io, ary efa ho amin'ny ora io, satria miatrika fampiharana iray izay efa teo amin'ny Android isika nanomboka tamin'ny 2010.
Yahoo Messenger vaovao izay efa azo alaina ao amin'ny iOS, Android, tranonkala ary amin'ny kinova birao. Ka raha te handefa hafatra ivelan'ny Internet ianao mba hisehoany rehefa avy eo amin'ny Internet ianao, dia aza mangataka andro amin'ny fijanonana ao amin'ny Google Play Store hanavao ny fampiharana na hametraka azy raha sanatria ka tianao ny manandrana azy.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fampiharana Android » Yahoo Messenger dia nohavaozina tanteraka mba ho lasa fampiharana tsara kokoa
Telltale Games hamoaka andiana fizarana Batman amin'ny 2016
Google dia manolotra doka fitsapana fitsapana ahafahan'ny mpampiasa manandrana fampiharana iray nefa tsy mila mametraka azy